Somaliland oo gacanta ku dhigtay Gaadhi laga soo dhacay dawlad deegaanka Soomaalida | Aftahan News
Somaliland oo gacanta ku dhigtay Gaadhi laga soo dhacay dawlad deegaanka Soomaalida
Baligubadle (Aftahannews) – Ciidamada bileyska Somaliland ee gobolka Hawd ayaa gacanta ku dhigay gaadhi weyn oo siday laba taangi oo nooca biyaha ah.
Taangiyadan oo ay sheegeen ciidanka Booliska gobolka Hawd in ay soo xadeen niman dhalinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka Hawd, kuwaas oo taangiyadaasi biyaha kala soo talaabay dhinaca Dawladd Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Taliyaha qaybta Booliska ee Gobolka Hawd ayaa ku wareejiyey Taliyaha ciidamada Bileyska ee degmada Xarshin ee dawladd Deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo agabkii saarnaaba, waxaanu ka waramay Taliyaha Ciidamada Bileyska gobolka Hawd sida ay u qabteen gaadhigaasi iyo agabka saaran ee la soo dhacayba.
“Ciidanka Bileyska ee gobolka Hawd gaar ahaana saldhiga Baligubadle, taliyaha saldhiga iyo ciidankiisuba waxa ay qabteen oo ay gacanta ku dhigeen gaadhi ka soo talaabay dhinaca Itoobiya, isla markaana siday laba taangi oo waaweyn oo kuwa waaweyn ah ee konton kontanka foosto qaada. Waxa halkaasi lagu qabtay tuugii soo qaatay iyo darawalkii gaadhiga shaanbooga ah waday.
Imika saacadaa la taagan yahayna waxaan doonayaa haddii alle yidhaa, Aniga oo taliyihii qaybta ah inaan ku wareejiyo maamulkii Itoobiya oo uu ka midka yahay hoggaanka nabadgalyada Cabdixasan Kaahin, guddoomiyaha Qabalayga ee Cali Sagal iyo guddoomiye ku xigeenka, waxa kale oo halkaa ila jooga oo aan furigii iyo alaabtii iyo qalabkii laga soo qaatay doonayaa inaan ku wareejiyo, Taliyaha Saldhiga Xarshin, Damme, Daahir Ciise Aadan,” ayuu yidhi Taliyaha Qaybta ee Somaliland.